Accueil > Gazetin'ny nosy > Hery sy Andry Rajoelina: Ikotofetsy sy Imahaka ary Itrimobe vaovao
Hery sy Andry Rajoelina: Ikotofetsy sy Imahaka ary Itrimobe vaovao
Mbola mitana ny ady hevitra pôlitika amin’izao fotoana izao ny fanehoan-kevitra nataon’i Hery Rajaonarimampianina tamin’ilay “fisandratana ho an’ny taona 2030” izay nanaovany fampisehoana an-dapihazo (théâtre) teny Iavoloha ny faha 24 janoary 2018, izay ho fahatsiarovana ny fotoana niakarany teo amin’ny fanjakana. Ny an’i Andry Nirina Rajoelina indray dia fanazavany tao amin’ny televizionina tsy miankina vitsy teto Antananarivo ny alahady faha 18 febroary 2018, izay mahakasika an’ilay “IEM” na ny “initiative pour l’émergence de Madagascar” na ny vina ny fisandratana mirindra ho an’i Madagasikara. Tany amin’ny faramparan’ny volana janoary 2018 dia efa heno fa samy hanao fanehoan-kevitra izy roalahy ireto. Somary niandry kely ny fahavitan’ny an’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ingahy Andry Nirina Rajoelina vao nihetsika ka tany Parisy no nanombohany izany.
Raha ny zavatra voalazan’izy roalahy ireto mahakasika ireo vinavina na revirevin’izy roa ireo dia mitovy tsy misy valaka tanteraka. Ny an’i Hery Rajaonarimampianina dia nametraka ny taona 2030 ho tanjona amin’izany. Ity farany kosa dia tsy misy fetrany ny azy fa izay idonany any no fetra farany.
Samy efa nitondra ny firenena avokoa izy roalahy ireto ary fototra ny fahantrana mihoa-pampana eto Madagasikara izao. Fantatra ny Malagasy tanteraka ny fomban’izy roalahy ireo sy ny zavatra vitany sy hainy. Nanomboka tamin’ny tetezamita ka hatramin’izao dia fahoriana tsy roa aman-tany no iainan’ny Malagasy noho ny ataon’izy roalahy ireto. Samy efa nanarin’ny FFKM (Fiombonan’ny fiangonana kristianina Malagasy) sy ny filoham-pirenena teo aloha profesora Zafy Albert izay vao nodimandry tsy ela akory izay izy roalahy. Mbola mananatra sy miteny azy ireo tsy ankijanona ingahy Didier Ratsiraka amin’ny hanarenana ity firenena ity. Toa ny rano natondraka ny lamosin-gisa izany ka dia izao iaraha-mahita izao ny zava-misy. Efa voa vao milaza hoe “mifona aho mifona” toa ny nation-dRavalomanana tamin’ny taona 2001-2009 hoe “angaha nisy Malagasy niady teto no hampihavanina”. Amin’izao fotoana izao dia io mizaka ny nataony io ingahy Ravalomanana Marc ka lasa mitaky ny fampihavanana indray.
Tsy azo inoana fa miady izy roalahy ireto ary tsy mifandray. Ingahy Hery Rajaonarimampianina dia olona tena natokisan’ingahy Andry Rajoelina tamin’ny fanjakana tetezamita 2009-2013. Nanankinany ny ministeran’ny Vola izay andrin’ny fanjakana. Niaraka nanao fampielezan-kevitra ary nanao izay hahalany azy tamin’ny fomba rehetra ingahy Andry Rajoelina.
Mody miady izy roalahy ankehitriny ary mieritreritra ny hanao toa an’i Poutine filohan’i Rosia sy Medvedev indray hono, satria mandeha dia mandeha ny resaka fa tsy homena olon-kafa intsony ny firenena raha tsy izy roalahy ao anatin’ny 40 taona, ka rehefa mahavita fe-potoana fitondrana (mandate) iray ny iray dia ampidirina hisolo azy ity faharoa. Dia izany no sary mivoaka amin’izao fotoana izao. Tena sinema tanteraka no ataon’izy roalahy ireto.
Ingahy Andry Nirina Rajoelina izay nirehareha fa nianatra nandainga sy namitaka tamin’iny fanehoan-kevitra iny dia tsy mahagaga raha toa ka tonga amin’izao tetika izao. Iza moa no nieritreritra fa nihaona antsokosoko izy sy ingahy Ravalomanana Marc teo aloha teo. Samy tsy nisy nanda io fihaonana io izy roalahy ireto. Izy roalahy ireto nefa no fototra ny rà-be nandriaka teo Antaninanarenina tamin’ny faha 7 febroary 2009 ka nahatonga faty olona tsy nisy toa izany. Rehefa nampihavanan’ny Malagasy tamin’ny alalan’ny FFKM dia nitsoaka andaharana ingahy Andry Rajoelina, nefa dia izao mihaona sy manao fifanarahana maizina izao indray izy roalahy ireto.
Mahakasika ny halatra avo lenta sy ny kolikoly, ny asan-dahalo ary ny fanondranana andramena sy vatosoa ary volamena tany ampitan-dranomasina tamin’ny alalan’ny varomaizina dia ny minisitra ny Vola no isan’ny tompon’antoka amin’izany dia ingahy Hery Rajaonarimampianina, izay mifehy ny ladoany ka ny lehibeny dia ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Nandritra ny dimy taonan’ny tetezamita teo ambany fifehezan’i Andry Nirina Rajoelina sy ny dimy taona nitondran’i Hery Rajaonarimampianina ny repoblika fahefatra no nitranga izany ary mbola takian’ny Malagasy ny fanadihadiana mahakasika ireny raharaha ireny.
Ankehitriny dia mody miady izy roalahy ireto. Ingahy Andry Rajoelina mody mifona amin’ny vahoaka Malagasy tamin’ny nanohanany an’i Hery Rajaonarimampianina hofidiana ho filoham-pirenena. Ka moa ve ahafahany hanonitra ny Malagasy nahantra fadiranovana noho ny hafetsifetsena nataon’izy roalahy ireo izany fifonana izany? Ny olona maty sy ny fianakaviany, ny olona very asa sy very fananana noho ny asan-dahalo sy ny asan-jilolahy ary ny tratran’ny “kidnapping”. Firy ny tantsaha very omby sy may trano vokatra ny asan-dahalo nitranga tamin’ny andro nitondran’izy roalahy ireto noho ny fanondranana omby any Chine? Dia mody mifona sy mifanome tsiny indray ankehitriny.
Ingahy Ravalomanana Marc izay toa an’Itrimobe no filamatr’izy roalahy ireto ka nahatonga izao olana goavana eto amin’ny firenena izao. Ivereno anie ny tantaran’Itrimobe dia mitovy amin’izy ireo ny tantara nisy tamin’izany ary mbola io averin’izy ireo indray ankehitriny. Lozabe!
Sary velon’i Ikotofetsy sy Imahaka ny raharaha ataon’i Andry Rajoelina sy ingahy Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Ikotofetsy sy Imahaka vaovao no hita velona eto Madagasikara. Aiza ny olona madio, ny olon-kendry ny manam-panahy ary ny olona matahotra an’Andriamanitra? Ny olana lehibe dia izy roalahy ireo no toa ohatra velona hitan’ny tanora ankehitriny ka hanome ohatra diso ho an’ny taranaka amin’ny fitondrana ny firenena. Aoka samy handinika isika Malagasy fa indrindra ireo milaza azy ho tia tanindrazana.